Wasiirka Varank: Waxaan ku jirnaa mustaqbalka waaxda baabuurta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWasiirka Varank: Waxaan ku jirnaa mustaqbalka waaxda baabuurta
05 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
waxaan nahay mustaqbalka warshadaha baabuurta ee wasiirka
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, tirooyinka on koritaanka ururada caalamiga ah ayaa sheegay in Turkiga ee 2019 intii ka eegay dhowr jeer hilib, "Waxaan u malaynayaa in this sii wadi doontaa in 2020 dib. Sannadkan, iyadoo maal-koritaanka in Turkey ay noqon doontaa caafimaad. "ayuu yiri wuxuuna.
Bangiga Adduunka, ka warshadlaydu Turkish iyo Ururka Ganacsiga Dadka (TUSIAD), International Investors Association (YASED) iyo Golaha Turkey dhoofinta lagu qabtay Istanbul kaashanaya "Ganacsiga iyo Global Value Chain Shirka" ayuu ku bilaabay. Isaga oo ka hadlayey furitaanka munaasabadda, Varank wuxuu xusay in qodobka ugu caansan ee wax ka beddalaya dhaqaalaha adduunka 30-kii sano ee la soo dhaafay ay yihiin silsiladaha qiimaha ee adduunka, wuxuuna caddeeyay in shabakadaha wax soo saarka ee ay sameysteen ganacsiga caalamiga ah iyo maal-gashiga ay ka dhigeen waddamo, shirkado iyo shaqaale kuwo isku xiran.
AKHRISKA kobcinta ganacsiga
Isagoo tilmaamay in iskaashi caalami ah loo baahan yahay si ka badan sidii hore, ayuu Wasiir Varank yiri, “Markaan aragno, Warbixinta Horu-marinta Caalamiga ah, oo Bangiga Adduunka uu si buuxda u baaro silsiladaha qiimaha si ay u soo bandhigaan tallooyin siyaasadeed, ayaa tixraac weyn noo ah.
2023 SHAQADA IKHTIYAARKA IYO FARSAMADA
Varank, 2023 Warshadaha iyo Technology sheegay istaraatijiyad ee wax soo saarka qiimo-daray, oo iyana waxay u sahli doona in la sameeyo siyaasadaha xalkaas in technology muhiim Turkey si meesha looga saaro horyaalka ugu sareeya ah, ayaa sheegay in ay doonayeen in ay ku riday mid ka mid ah dunida ee ka mid ah dhaqaalaha sare ugu. "Tallaabo kasta oo aan qaadno oo aan qaadno waxay waddankeena u geyn doontaa meelaha leh qiime sare oo sarreeya oo ah silsiladaha qiimaha adduunka," ayuu yiri Varank.
TUSAALE COUNTRY TURKEY
Varank wuxuu ku sheegay warbixintii laxiriirta ee Bangiga Aduunka in dalal badan oo qorshayaal siyaasadeed ah la keenay wadamada si loogu daro silsiladaha qiimaha badan oo casri ah, iyo in wasaaradu ay si aad ah uga shaqeyneyso ku dhawaad ​​dhamaan qorshahan soosocda mudo 1,5 sano ah. Varank for Turkey, waxay noqon doontaa tusaale u ah dalal badan oo saaraysa xaqiiqda ah in shahaadooyinka sheegay.
Isagoo caddeeyay inay gaareen kaalinta 2-aad ee Bangiga Adduunka ee Dhaqaalaha ee Doing Business Index iyadoo 27 ay soo baxeen 33-dii sano ee la soo dhaafay waxaan uga mahadcelinayaa dib-u-habaynta qaab-dhismeedka ee ay fuliyeen, ayuu yiri Varank, “Waxaan ka shaqeynaynaa inaan soo bandhigno wax qabad la mid ah sanadkaan. Waxaan sameyn doonaa qaban-qaabooyin badan oo ka dhigaya jawiga ganacsiga inuu noqdo mid maal-galiyayaal saaxiibtinimo leh, fududeyn doona ganacsiga kuna dhiirrigeliya maalgashiga. ”
PILOT MASHRUUC KUNTADA BANKA Adduunka
Isagoo xusay inay mashruuc tijaabo ah la sameyn doonaan Bangiga Aduunka ee warshadaha gawaarida, Wasiirka Varank wuxuu yiri: “Mashruucan wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa siyaasadahayaga horumarineed ee alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah. Mashruucan, waxaan la imaan doonaa shirkado caalami ah oo ka howl gala dalkeena qeybta iyo alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah, waxaanan xoogga saareynaa sidii aan u hagaajin laheyn awoodaheenna dhinacyada sida karti-xirfadeedka, xirfadaha maamulka, geedi socodka wax soo saarka iyo tayada. Wasaaraddeenu sidoo kale waxay higsaneysaa inay sameyso dalabyo isku mid ah oo waaxyo kaladuwan ah iyadoo la helo hannaan barnaamijkan ah. ”
Soo saarida Tikniyoolajiyadda Fudud
Turkey, Midowga Yurub sheegaya in Varank qeybiyaha ugu weyn ee beerta baabuurta, wax soo saarka technology horumar leh kula dhismeedka ku haboon heerka dunida, ayuu yidhi. Varank, "Turkiga Car mashruuca, waxaana celintiisa Fadilmo meelaha cusub oo xiiso leh. Waxaan higsaneynaa inaan dhaafno soo saarista gaari halkan, waxaan u maleyneynaa. ”
WAXAAN KU XIRNAANNAA DHAQANKA
Varank, sharxaya isbeddelka farsamada warshadaha gaari ah, "Turkiga Otomobili'yl la dhiso noo brand u tartamaan suuqa caalamiga ah, waxaan dhihi mustaqbalka ee warshadaha ee waxaan sidoo kale iyaga leeyihiin. Mashruucan wuxuu sidoo kale horseedi doonaa warshadaha wax soo saareyaasha gawaarida inay is casriyeeyaan teknoolojiyadda cusub. ”
CIYAARAHA DALKA GLOBAL
Varank wuxuu xusay inay u baahan yihiin qof walba fikradiisa, aqoontiisa, iyo aragtidiisa gaarka ah, iyo inay sii wadi doonaan wada shaqeynta dhow ee ay la leeyihiin dhammaan qaybaha ay khuseyso dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo inay noqon doonaan kuwa ka mid ah kuwa ugu awooda badan tartanada caalamiga ah ee alaabada iyo teknoolojiyadda ay horumariyaan.
Isagoo sharraxaya in tilmaamayaasha kalsoonida dhaqaale ay sii kordhayaan, Varank wuxuu yiri dib u soo nooleynta wax soo saarka warshadaha ayaa la arkay, iyo in isbedelka wanaagsan uu noqon doono mid joogto ah oo diiradda lagu saari doono wax soo saarka qiimaha badan iyo kordhinta shaqooyinka.
Wasiirada Varank, 2019 ee ururada caalamiga ah oo ay ku jiraan Baanka Adduunka, ayaa sheegay in saadaasha kobaca ay Turkey ka sii weyn ka beddeshey dhowr jeer, "Waxaan u malaynayaa in this sii wadi doontaa in 2020 oo waxaan aaminsanahay in dib u eegis this. Sannadkan, iyadoo maal-koritaanka in Turkey ay noqon doontaa caafimaad. "ayuu yiri wuxuuna.
Dumarka Waddaniga ah, Waxay Dheheen Waxaan Ku Jirnaa Rakaabka ...
Wasiirka Binali Yildirim: Saldhiga Ankara 'Ya Bitecek, Ya Biz Bitecegiz' ayuu yiri
Warshadaha baabuurta iibiya